Òtù Zionist ọ̀ megidere omume ọma? Rabbi Michael Avraham
Òtù Zionist ọ̀ megidere omume ọma?
Nzaghachi > Atiri: Izugbe > Òtù Zionist ọ̀ megidere omume ọma?
Adir Ajụrụ ya ọnwa 7 gara aga
Ndewo Rabbi, ahụrụ m na ị kọwapụtara onwe gị dị ka “Zionist okpukperechi”, na-enweghị akara okwu, iji mesie ike na Zionism gị sitere na ụkpụrụ omume zuru ụwa ọnụ. Yabụ, achọrọ m ịjụ gị ihe ị chere gbasara ederede a:
"Gịnị bụ ịkpa ókè agbụrụ?
ịkpa ókè agbụrụ bụ ịkpa ókè ma ọ bụ ibu iro na ndabere
Gịnị bụ Zionism?
Zionism bụ ngagharị maka nguzobe obodo ndị Juu na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri Mediterenian, mpaghara nke n'oge mmalite nke Zionism bụ ndị na-abụghị ndị Juu - Palestine - Ndị Kraịst na ndị Alakụba bi.
Ọ dị mma, mana kedu ka nke ahụ si eme Zionism ịkpa oke agbụrụ?
dị nnọọ mfe. Cheta nkọwa nke ịkpa ókè agbụrụ? Ka anyị jiri ya:
ịkpa oke na agbụrụ agbụrụ - Zionism enwebeghị mgbagha echiche nke ndị Palestine nwa amaala gbasara iguzobe obodo ndị Juu n'ala nna ha. Nke a bụ nnukwu mmebi iwu nke ọchịchị onye kwuo uche ya: ọ bụ ezie na ha ruru 100% nke ndị bi na ya, ọ dịghị onye na-echegbu onwe ya ịjụ ihe ụmụ amaala Palestine chere. Gịnị kpatara? N'ihi na ha abụghị nnọọ ndị Juu. Ụkpụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya ka a ma ama - ọchịchọ nke ihe ka n'ọnụ ọgụgụ - bụ ndị a na-ajụ ndị bi n'obodo ahụ, ma ọ bụrụ na ha sitere na agbụrụ na-ezighị ezi. Ndị obodo Palestine n'ezie kwadoro nnwere onwe Arab, mana echiche ha abụghị ihe na-adọrọ mmasị. Nke a bụ ihe kpatara ndị Zaịọn ji kwugidere nke ukwuu n'ime afọ niile e nyere iwu ka e guzobe kansụl ndị omebe iwu - n'ihi na ọchịchọ nke ọtụtụ ga-ewepụ ụlọ ọrụ Zionist.
Ịkpọasị agbụrụ nke agbụrụ - Ebe ọ bụ na ọbịbịa nke Zionism, a hụwo ndị Palestine bi n'ala nna ha ma ghọta dị ka "ihe mgbochi." Gịnị kpatara? N'ihi na Zionism - nguzobe nke steeti "ndị Juu" - chọrọ ọtụtụ ndị Juu na mba ahụ. Na n'ihi na e nwere ihe ka ọtụtụ n'ime ndị Palestine na-abụghị ndị Juu n'oge ahụ, kpọmkwem ọnụnọ nke ụmụ amaala a ghọrọ ihe na-adịghị mma. Zionism mere ihe a na-apụghị ikweta ekweta: a na-ahụta ndị mmadụ dị ka ndị a na-achọghị - naanị n'ihi na ha bi n'ụlọ nke ha. Na mgbe onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Israel nke oge a na-akpọ ndị Palestine "ogwu dị n'akụkụ" (o doro anya na onye dere ederede pụtara onye isi ala Israel ugbu a, Naftali Bennett, bụ onye kwuru nke a eleghị anya megide ndabere nke nkụda mmụọ na ọnụnọ ndị Palestine nọ n'ihu ọha. ókèala “na-egbochi” Izrel na-achịkọta ha) na mmetụta ya ka dị n’ahụ́ anyị ruo taa.”
Rabi nwere azịza maka nzọrọ ndị a? Ihe ndị a na-ada ka nkwupụta dị oke njọ. N'ihi na i kwuru na ị bụ onye Zayọn dị ka David Ben-Gurion bụ onye Zayọn, ị gaghị aza ha na-aza, "Nke a bụ ihe e nyere anyị n'iwu na Torah." Ajụjụ, yabụ, gịnị bụ azịza gị nye ha, dị ka "esecular scores."
Echiche m bụ na ederede na-esonụ bụ ihe efu.
Nke mbụ, Zionism m adabereghị na ụkpụrụ omume, dịka njikọ ezinụlọ m na-esiteghị n'omume. Ihe ndị a bụ naanị eziokwu. Abụ m onye ezi na ụlọ, abụrụkwa m ndị obodo m. Ma dị nnọọ ka ezinụlọ m chọrọ ebe obibi, ndị m chọkwara ebe obibi.
N'akụkụ a nke mba ahụ bi ụmụ amaala na-enweghị njirimara mba, na-enweghị ọchịchị na enweghị obodo. Ọ bụghị nsogbu ịbịa dozie ebe a na-agba mbọ ka e guzobe ebe obibi nke mba ma na-echekwa ikike ha. Karịsịa ha nyere ha nkewa ma ha jụrụ. Ha gara agha, rie ya. Ya mere, akwakwala ákwá.
Akara ọ chọrọ enweghị Zara ọnwa isii gara aga
Ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na ọnụ ọgụgụ ndị bi na mpaghara a n'oge mmalite nke Zionism dị ntakịrị, na ọtụtụ n'ime ha bụkwa ndị si mba ndị agbata obi kwabatara. Site na mmụba nke mmegharị Zionist na mmepe nke ahia na akụnụba, ọtụtụ ndị ọzọ họọrọ ịkwaga ebe a. Ihe dị ka otu narị afọ ka e mesịrị, ha kpebiri na ha bụ ndị mmadụ, ndị ọzọ bụkwa akụkọ ihe mere eme.
Nkọwa nke Copenhagen Zara ọnwa isii gara aga
ịkpa oke ọ bụghị n'ihi agbụrụ kama na onye nwe ya. Mgbe ị debere ikike ikpebi ndị ọbịa ga-abata n'ụlọ gị, ị naghị "akpa ókè n'ihi agbụrụ." Enweghị ọdịiche dị mkpa n'etiti igbochi ịbanye na mbụ na ịpụpụ ndị bịara abịa azụ azụ ma ọ bụrụ na ha wakporo ụlọ gị mgbe ịnọghị ya.
Ndị Izrel bụ ụmụ Babịlọn na Rom (gụnyere ndị anyị kwerela ka oge na-aga bata n’ezinụlọ) ma malite mgbe ahụ a na-ewere ndị nketa dị ka naanị ndị nwe ala ahụ n’ụzọ iwu kwadoro.
Emanuel Zara ọnwa isii gara aga
Ma n'agbanyeghị nke a, Rabbi Michi na-eche na a ga-enwe ọdịnihu n'ike na kwa na nkwado nke "mgbanwe" mmasị: ebe a bụ deranged Ben Barak:https://www.srugim.co.il/620627-%d7%a8%d7%9d-%d7%91%d7%9f- %d7%91%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa
Samu Alcomisi Gbanye Ntụaka na iGod videos
Michi Gbanye Azịza nye onye ozi ọha
eze Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)